မန္တလေး ၊ မုံရွာ နှင့် ပြည် မြို့တို့ တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး ဆက်လက် ဆန္ဒပြ | Freedom News Group
မန္တလေး ၊ မုံရွာ နှင့် ပြည် မြို့တို့ တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး ဆက်လက် ဆန္ဒပြ
by FNG on May 22, 2012	လျှပ်စစ်မီး ရရှိ ရေး အတွက် မန္တလေး မြို့တွင် ယနေ့ည ဉ် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် တောင်း
ဆို ဆန္ဒပြ မှု များ ပြု လုပ် ခဲ့ ရာ လူ ထောင်ပေါင်း များ စွာ ပါဝင်ခဲ့ သည်။ ၂၆ နဲ့ ၂၇ လမ်းကြား၊
၇၈ လမ်း ကျုံး အနီး ရှိ မန္တလေး တိုင်း လျှပ်စစ် ရုံးချုပ် ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ သူ များ က ဖယောင်း တိုင်
မီးများ ၊ ဆိုင်းဘုတ် များ ကိုင်ဆောင် ပြီး ဆန္ဒပြ ခဲ့ သည်
မန္တလေး မြို့ နည်း တူ မုံရွာ နှင့် စစ်ကိုင်းမြို့ များ တွင်လည်း လျှပ် စစ်မီး ရရှိ ရေးတောင်း ဆို ဆန္ဒပြ
မှု များ ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည်။ မုံရွာ မြို့တွင် မုံရွာ အား ကစား ကွင်း အရှေ့ မှ သည် တိုင်းလျှပ်စစ် ရုံး နှင့်
မြို့ လည် ဗိုလ်ချုပ် လမ်းမ မြို့ တော် ခန်း မရှေ့သို့လမ်းလျှောက် ချီ တက် ဆန္ဒပြမှု ဖြစ် ပွား ခဲ့
မန္တလေး မြို့ဒုတိယ နေ့ဆန္ဒပြ မှု တွင် ရဲ ကားများ ၊ လုံထိမ်း မော်တော် ယာဉ် ကားများ ဖြင့် အနီး ကပ်
စောင့် ကြပ် ကြည့် ရှု မှု များ ပြု ခဲ့ ပြီး တိုင်း လျှပ်စစ် ရုံး နှင့် မန္တလေး တိုင်း ဒေသ ၀န်ကြီး ချုပ် ၏ အိမ်
တို့တွင် လုံခြုံရေး များ တိုးမြှင့် ချထား သည်။
မန္တလေး မြို့လျှပ် စစ်မီး ရရှိ ရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြ သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် လမ်း ၈၀ တရုတ်တန်း နေ
ကိုမောင်မောင်ကြီး က “ ၆ နာရီ မီးပေး မယ် ဆိုတဲ့ အချိန် မှာ တောင် မီး က အပြည့် မရဘူး ၊ ရာသီ
ဥတု က ပူတဲ့ အချိန် လျှပ် စစ်မီး မီး မရှိတော့ ပန်ကာ တောင် ဖွင့် လို့မရဘူး ဟု FNG သို့ပြောသည်။
မုံရွာ မြို့က လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး တောင်း ဆို ဆန္ဒပြမှု
ယနေ့ည မန္တလေး မြို့မီးရရှိ ရေး ဆန္ဒပြ မှု တွင် မြို့ ခံ များ ပိုမို ပါဝင် ပူးပေါင်း Photo : Aung Shin
ယနေ့ည မန္တလေး မြို့ဆန္ဒ ပြ ပွဲ တွင် အစိုးရ သတင်းစာ များ တွင် ဖော် ပြထား သည့် အလှည့် ကျ မီး
ပေးဝေမှု စနစ် များ စီစဉ်ထား ပြီး ပြောသည့် အတိုင်း မလုပ် ပုံ ကို V နိုင်း ပိုစတာ များ ဖြင့် လည်း သရုပ်
ဖော် ပြသခဲ့ သည်။
ဆန္ဒပြ သူ အချို့က တရုတ် နိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ မှ လျှပ် စစ်မီး ကို ၀ယ်ယူထား ရှိ မှု ကို ရပ် တန့် 
ပေး ရန် တောင်း ဆို ခဲ့ သည်။
ပြည်မြို့ တွင် လည်း ယနေ့ည ၈ နာရီ ခန့် က ဖယောင်းတိုင်မီး ထွန်းညှို ဆန္ဒပြ မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
Photo Credit : Mg Ba Oo, CJ Myanmar, Kyawmoe Win, Ye Aung Thu, Aung Shin, Kyaw Swar Myint မုံရွာ မြို့က လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး တောင်း ဆို ဆန္ဒပြမှု ယနေ့ည မန္တလေး မြို့မီးရရှိ ရေး ဆန္ဒပြ မှု တွင် မြို့ ခံ များ ပိုမို ပါဝင် ပူးပေါင်း Photo : Aung Shin About these ads
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ထိုင်း က ပဒေါင် လူမျိုး တွေ ကို ပြန်လွှဲ ပေးမှာ လား
သေဒဏ်ချမှတ် ခံရတဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင် အသည်း ရောဂါ ကြောင့် ရှင်သန်ရက် အနည်းငယ်သာကျန် →
သူတို့ကတော့ သူတို့အမှန် ကြည့်ဘဲပြောနေတာ တကယ်က????????????
May 22, 2012	ရဲ	#
၀န်ကြီးကတော့တောင်းပန်ထားတယ် ဒါပေမဲ့ ?????????????
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeMyanmar frees 44 political prisonersMyanmar's MPs lack resourcesU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsMyanmar Emerges From the ShadowsMyanmar's women boxers land blows for equalitySoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockout27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,615,938 hits